Indlu yokutshixa iCanal du Nivernais, kufutshane neMorvan
Indawo ubunjwe kumgangatho osezantsi kwegumbi eziphilayo lokutyela enkulu, kukho ikhitshi yokuvula ifakwe kwi Terrace, a epasejini kunye mntanam ehamba indawo ofisi, indawo yangasese mayixhotyiswe wokuhlamba umatshini. Ngesandla.
Phezulu, indawo yokuma ekhokelela kumagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlambela elikhulu elinefestile kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Umgcini wesitshixo usekupheleni komjelo, ulungele ukuziqhelanisa nemidlalo yasemanzini (kufuphi nechibi laseBaye, ukurenta izikhephe zombane, iibhodi zokubheqa, iidinghies, iicatamarans, ukusefa umoya ... uhamba)
Abathandi bokuloba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba, abaqalayo okanye abanamava, uya konwaba.
Kufuphi neMorvan kunye nesiza sifikeleleka ngokuthe ngqo ngendlela.
Ilali enazo zonke izinto eziluncedo 6 kms.
Ibha yokutyela kwindawo (50m), iimveliso zasekhaya, ukutya, i-terrace.
4.32 · Izimvo eziyi-69
Dining bar, iiwayini eziphilayo, imveliso yengingqi, Morvan ham, itshizi yebhokhwe, terrines, nobusi, gingerbread, jellies iziqhamo, eziveliswa amagcisa eselumelwaneni, ilali 6 km kude kunye yokubhaka, unosilarha, igesi, evenkileni.
Ichibi laseMontapas imizuzu emi-5 ngemoto, ulwandle olufanelekileyo kubantwana abancinci kakhulu. Umqeqeshi wokuqubha ngexesha lasehlotyeni.
Nasiphi na isicelo okanye umbuzo wamkelekile.